18/01/2018 - 14:15 : PESTA: Nahitana trangana pesta tany Ankazobe omaly.Mpampianatra 1 amina sekoly tsy miankina 1 ao anatin'ny CISCO Ankazobe no voan’ny pesta atody tarimo. Nampiato vonjimaika ny fampianarana ao amin'io sekoly io ary namendraka fanafody ka amin'ny alatsinainy no miverina amin'ny laoniny ny fampianarana.
Archive du 20170817
Dosie maloton-dRavatomanga Tsy ho afa-bela Rajoelina
Mipongatra tsikelikely ireo dosie maloton’ilay mpanefoefo Mamy Ravatomanga momba ny nahazoany harena tsy ara-drariny ary re fa tsy ho afa-bela eo anatrehan’ny lalàna izy na eo aza ny harembeny.
Fitsidihana ofisialy any Afrika Hitondra ny vady aman-janany ny praiminisitra
Nahazo fanasana avy amin’ny filoha Afrikanina Tatsimo Jacob Zuma hiatrika ny fivoriana faha-37 ho an’ny firenena mpikambana eo anivon’ny SADC hatao ny 19-20 aogositra any Afrika Atsimo ny fanjakana Malagasy.
Sakantsakana amin’ny fifidianana 2018 Tsy azo ekena, hoy ny Amerikanina
Nihaona tamin’ny Praiminisitra Mahafaly Solondrasana Olivier teny Mahazoarivo ny Delegasionina mafonja avy amin’ny kongresy Amerikanina omaly.
Paul Rabary Miahiahy azy ny HVM
Resaka efa nandeha ny hirotsahan’i Paul Rabary, minisitry ny fanabeazam-pirenena ho kandida filoham-pirenena amin’ny taona 2018, fa nodisoiny.
Lisi-pifidianana Ezahana ho mangarahara, hoy ny CENI
Efa eny anivon’ireo biraom-pokontany manerana ny nosy avokoa amin’izao fotoana ny lisi-pifidianana, raha ny fanazavan’ny filohan’ny vaomiera mahaleotena momba ny fifidianana na ny CENI, omaly, tetsy amin’ny foibeny Alarobia.
May ny endim-boanjon’ny HVM Raikitra ny fizarazaran-javatra
Manetsiketsika izay rehetra azo hetsehina hahafahana manakona ny tsy mety natao tao anatin’ny 4 taona latsaka kely ny mpitondra HVM amin’izao fotoana izao.
Fanajana etika sy deontolojia Manahirana, hoy ny filoham-pirenena
Nanafatrafatra ireo mpikamban’ny holafitry ny mpisolovava tetsy amin’ny foiben’izy ireo etsy Anosy omaly ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, mba hanaja ny etika sy deontolojia eo am-panatanterahana ny asan’izy ireo.
Fiara “Golf Type 4” teny Akadindratombo Nidona avy eo nirehitra
Fiara iray marika "Golf type 4" nidona teo amin'ny "Rond point" teny Ankadindratombo ny talata alina tokony ho tamin'ny 11 ora, ka may kila forehitra tsy nisy noraisina.
Mivelona amin’ny fanantenana
Mivelona amin’ny fanantenana ny mino, hoy ny lohahevitry ny fiangonana iray anisan’ny lehibe eto Madagasikara, iray volana lasa izay.
KAOMININA AMBOHITRIMANJAKA Tsy avelan’ny kaominina manao biriky intsony ny mponina
Ny 95%-n’ireo mponina ao anatin’ny kaominina Ambohitrimanjaka dia saika mivelona amin’ny asa fanaovam-biriky avokoa. Ankehitriny anefa misedra olana goavana izy ireo.